Da'wah in Myanmar (Burma): Surah 076 Al Insan : The Human
Surah 076 Al Insan : The Human
၀၇၇။ စူရာ အလ် အင်န်စားန်းလူသား ကဏ္ဍ
(မက္ကာမြို့တော်ကျ- ၃၁ အာယသ်တော်)
၀၇၆း၁။ လူသား၏အပေါ်ဝယ် ခေတ်ကာလအနက် အချိန်တစ်ချိန်သည် ဧကန်အမှန်ရောက်ရှိခဲ့၏။ ထိုလူသားသည် (ယင်းအချိန်တွင်) ဖေါ်ပြလောက်သော အခြေအနေတစ်ခုမျှပင် မဖြစ်ခဲ့ပေ။
၀၇၆း၂။ စင်စစ် ငါအရှင်မြတ်သည် လူသားကို စမ်းသပ်လိုသဖြင့် ရောနှောထားသော ကာလလ ရေကြည်ဖြင့် ဖန်ဆင်းတော်မူခဲ့သည်။ သို့ဖြစ် ငါအရှင်မြတ်သည် ၄င်းအား ကြားသူ မြင်သူ အဖြစ်ပြုလုပ်ခဲ့၏။
၀၇၆း၃။ စင်စစ် ငါအရှင်မြတ်သည် ၄င်းအား ကျေးဇူတင်သည်ဖြစ်စေ၊ ကျေးဇူးကန်းသည်ဖြစ်စေ တရားလမ်းမှန်ကိုြ့ပသခဲ့၏။
၀၇၆း၎။ စင်စစ် ငါအရှင်မြတ်သည် ကာဖိရ်များအဖို့ သံကြိုးများ၊ လည်ကွင်းများ၊ တောက်လောင်လျှက်ရှိ သော မီးကို အသင့်ပြုလုပ်ထားတော်မူခဲ့၏။
၀၇၆း၅။ စင်စစ် သူတော်ကောင်းတို့သည် ပရုပ်ရောစပ်ထားသောအရက်ဖြင့် ပြည့်လျှံလျှက်ရှိသည့် ခွက်မှ သောက်သုံးကြပေမည်။
၀၇၆း၆။ အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်၏ ကျွန်တော်တို့သည် ထိုစမ်းမှရေကို သောက်သုံးကြမည် ၄င်းစမ်းမှ ရေကို လိုရာသို့လည်း စီးဆင်းစေကြပေမည်။
၀၇၆း၇။ ထိုသူတို့သည် တာဝန်များကို ကျေပွန်ကြမည့်အပြင် အကြင်နေ့၏ ဘေးအန္တရယ်ကိုလည်း စိုးရိမ်နေကြကုန်၏။ ထိုနေ့၏ အန္တရယ်သည် ပြန့်နှံ့နေ၏။
၀၇၆း၈။ ထို့နောက်သူတို့သည် အစားအစာကို ခုံမင်ကြသော်လည်း ဆင်းရဲသူ၊ မိဘမဲ့ကလေးများနှင့် သုံ့ပန်းတို့အား ကျွေးမွေးကြကုန်၏။
၀၇၆း၉။ ကျွန်ုပ်တို့ အသင်တို့အားကျွေးမွေးသည်မှာ အလ္လာဟ်အတွက်သာလျှင်ဖြစ်၏။ ကျွန်ုပ်တို့သည် အသင်တို့ထံမှ ကျေးဇူးတင်ခြင်းနှင့် မည်သည့် ကျေးဇူးကိုမျှလည်း မရည်ရွယ်ပါ။
၀၇၆း၁၀။ စင်စစ် ကျွန်ုပ်တို့သည် အရှင်မြတ်ထံတော်မှ ခက်ထန်ကြောက်ရွံ့စဖွယ် ထိုနေ့ကို ကြောက်ရွံ့စိုးရိမ်နေကြ၏။
၀၇၆း၁၁။ သို့ဖြစ်ပေရာ အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်သည် သူတို့အား ထိုနေ့၏ ဘေးအန္တရာယ်မှ လွတ်ကင်းစေ မည့်အပြင် သူတို့အား ပျော်ရွှင်မှုနှင့် ကြည်နူးမှုကို တွေ့ကြုံစေတော်မူမည်။
၀၇၆း၁၂။ ထို့အပြင် ငါအရှင်မြတ်သည် သူတို့အား သီးခံတရားထားရှိမှုကြောင့် ဂျန္နသ်ဘုံကို၎င်း၊ ပိုးအ၀တ်အစားများကို၎င်း ပေးအပ်တော်မူမည်။
၀၇၆း၁၃။ ၄င်းတို့သည် ဂျန္နသ်သုခဘုံဝယ် သလွန်ထက် မှီ၍ထိုင်ကြအံ့၊ လောင်မြိုက်သော အပူရှိန်ကို၎င်း၊ ခိုက်ခိုက်တုံအောင်ချမ်းလှသော အအေးဒဏ်ကိုမည်း ခံစားကြရမည်မဟုတ်ပေ။
၀၇၆း၁၄။ ၄င်းအပြင် သစ်ပင်များမှာ ၄င်းတို့အပေါ် ကိုင်းညွှန့်လျက်ရှိကြပေမည်။ အပြွတ်လိုက်သီးသော သစ်သီးဝလံတို့မှာ ညွှတ်ကျလျက်ရှိကြပေမည်။
၀၇၆း၁၅။ ထို့အပြင် ၄င်းတို့ထံ ငွေပုကန်များသည်၎င်း၊ ဖန်ခွက်များသည်၎င်း လှည့်လည်လျက်ရှိနေမည်။
၀၇၆း၁၆။ ၄င်းဖန်ခွက်များသည် ငွေသားဖြင့်ပီးသော ဖန်ခွက်များဖြစ်ပြီး ၄င်းဖန်ခွက်ကို ချိန်ဆကာ ဖြည့်ထားကြမည်ဖြစ်သည်။
၀၇၆း ၁၇။ ထိုအပြင် ၄င်းတို့သည် ချင်းဖြင့်ရောစပ်ထားသော အရက်များကို အပြည့်အလျှံ တိုက်ကျွေးခြင်းခံ ရမည်။
၀၇၆း၁၈။ ဂျန္နသ်ဘုံအတွင်း စလ်စဘီးလ် မည်သော စမ်းမှ။
၀၇၆း၁၉။ ထို့အပြင် ၄င်းတို့ထံတွင် သေဆုံးခြင်းမရှိသော အစဉ်နုငယ်သော သူငယ်တို့သည် လှည့်လည် ပြုစုနေကြမည်။ အသင်တို့ ၄င်းတို့အား တွေ့လျှင် ဖြန့်ကြဲထားသော ပုလဲလုံးများဟု ထင်ကြပေမည်။
၀၇၆း၂၀။ အသင်သည် ထိုနေရာ(ဂျန္နသ်)ကို ကြည့်လျှင် ကျေနပ်မှုကို၎င်း ကြီကျယ်သော ဂုဏ်ရည်ကို၎င်း တွေ့ရပေမည်။
၀၇၆း၂၁။ ထို့အပြင် ၄င်းတို့ခန္တာပေါ်ဝယ် ပိုးထည်အပါးစားများ၊ အထူစားများ၊ ရွှေချည်ဗရိုကိတ်အ၀တ် အထည်များရှိကြမည်။ ၄င်းအပြင် ငွေလက်ကောက်များကို ၀တ်ဆင်ပေးမည်။ ထို့အပြင် ၄င်းတို့၏ အရှင်မြတ်သည် ၄င်းတို့ကို အလွန်သန့်စင်သော အရက်ကို တိုက်ကျွေးမည်။
၀၇၆း၂၂။ ဤသည်ကား ၄င်းတို့ကို ချီးမြှင့်သော ကျေးဇူးပင်ဖြစ်သည်။ စင်စစ် အသင်တို့၏ ကြိုးပမ်းမှုသည် အရှင့်မြတ်ထံ ကျေနပ်လက်ခံပြီးဖြစ်သည်။
၀၇၆း၂၃။ ဧကန်မလွဲ ငါအရှင်မြတ်သည်သာလျှင် အသင့်တို့အပေါ်ဝယ် ကုရ်အာန်ကျမ်းကို တဖြည်းဖြည်း ချပေးတော်မူခဲ့၏။
၀၇၆း၂၄။ သို့ဖြစ်၍ အသင်သည် အသင်၏ အရှင်မြတ်၏ အမိန့်တော်အပေါ် ကြံခိုင်စွာ ရပ်တည်ပါ။ ထို့အပြင် အသင်သည် အပြစ်ရှိသူများနှင့် ကာဖိရ်တို့၏ ပြောဆိုချက်ကို မလိုက်နာပါနှင့်။
၀၇၆း၂၅။ ထို့အပြင် အသင်သည် နံနက်ယံတွင်၎င်း၊ ညနေချမ်းတွင်၎င်း အသင့်မွေးမြူဖန်ဆင်းရှင်၏ နံမတော်ကို တမ်းတနေပါလေ။
၀၇၆း၂၆။ ထို့အပြင် အသင်သည် ညဉ့်၏ အစိတ်အပိုင်း အချို့ဝယ် စိဂ်ျဒဟ် ပြုလျှက် ညဉ့်၏ ရှည်လျှားသော အစိတ်အပိုင်းဝယ် အရှင်မြတ်၏ သန့်ရှင်းစင်ကြယ်မှုကို မြွက်ဆိုပါလေ။
၀၇၆း၂၇။ ထို့အပြင်သူတို့သည် လောကီကို နှစ်သက်ကြ၏။ မိမိတို့ရှေ့ဝယ် ခက်ခံ ကြမ်းတမ်းသောထို နေ့ကို စွန့်ထားကြကုန်၏။
၀၇၆း၂၈။ ငါအရှင်မြတ်သည်သာလျှင် သူတို့အား ဖန်ဆင်းတော်မူပြီး၊ ၄င်းတို့၏ စိတ်အပိုင်းများကို ခိုင်ခံ့တော်မူစေခဲ့သည်။ ထို့အပြင် ငါအရှင် အလိုရှိတော်မူလျှင် ၄င်းတို့အစား ၄င်းတို့နှင့်တူသူတို့ဖြင့် လဲလှယ်တော်မူမည်။
၀၇၆း၂၉။ ဤစူရာဟ်သည် ဆုံးမသြ၀ါဒပင်ဖြစ်သည်။ မည်သူအဆို အလိုရှိလျှင် ၄င်း၏ ဖန်ဆင်းရှင်ထံ သွားရာလမ်းကို ရွေးချယ်ရမည်ဖြစ်သည်။
၀၇၆း၃၀။ စင်စစ် အလ္လာဟ်အရှင်မြတ် အလိုရှိတော်မမူဘဲ အသင်တို့သည် အလိုရှိနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။ ဧကန်စင်စစ် အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်သည် အရာခပ်သိမ်းကို သိသောမူသောအရှင် ဆင်ခြင်ထံတရားနှင့် ပြည့်စုံသောမူသောအရှင်ဖြစ်တော်မူသည်။
၀၇၆း၃၁။ ထိုအရှင်မြတ်သည် မိမိအလိုရှိတောမူသောသူအား မိမိဂရုဏာတော်အတွင်း ၀င်ရောက်စေပြီး သို့သော မတရားသောသူတို့အဖို့မူ နာကျင်ဖွယ်ဖြစ်သော အပြစ်ဒဏ်ကို အသင့်ပြုလုပ်ထားတော်မူ၏။
Posted by A Muslim of Myanmar at 2:06 PM
us lwin said...
Under the Title Surah Muzammal The Surah Al,insaan posted.Please check it.
A Muslim of Myanmar said...
Thank you for comments and correction was made.